Ilifu lobuGcisa eliKhuselekileyo: Ungasisebenzisa njani isiQinisekiso seNjini ukuya kuvavanyo lwe-A / B, kwaye ukhawuleze | Martech Zone
Ukuba ujonge ukuqhuba inkqubo yokulinga ukunceda uvavanyo lwakho lweshishini kunye nokufunda, amathuba owasebenzisayo Ilifu lobuGcisa elifanelekileyo -Okanye ubuncinci uyijongile. Ngokufanelekileyo esinye sezixhobo esinamandla kulo mdlalo, kodwa njengaso nasiphi na isixhobo esinjalo, ungayisebenzisa gwenxa ukuba awuyiqondi ukuba isebenza njani.
Yintoni eyenza ukuba amandla abe namandla ngokugqibeleleyo? Isiseko seseti yento yayo ilele kwezona nkcukacha zinolwazi kwaye zinomdla kwizixhobo zeqela lesithathu, ekuvumela ukuba ugxile ngakumbi ekufumaneni iimvavanyo ezibalulekileyo bukhoma - ngaphandle kokukhathazeka ukuba utolika ngokungachanekanga iziphumo zakho.
Ngokufana nesifundo esingaboniyo sendabuko kumayeza, A uvavanyo / B izakubonisa ngokungakhethiyo okwahlukileyo unyango yendawo yakho kubasebenzisi abohlukeneyo ukuthelekisa ukusebenza konyango ngalunye.
Iinkcukacha-manani zisinceda ekwenzeni izigqibo malunga nokuba olo nyango lunokusebenza njani kwixesha elide.
Uninzi lwezixhobo zovavanyo lwe-A / B zixhomekeke kolunye lweentlobo ezimbini zokuthotyelwa kweenkcukacha manani: Izibalo ezibakho rhoqo okanye izibalo zeBasesian. Isikolo ngasinye sinezinto ezahlukeneyo ezilungileyo nezingalunganga-Amanani olwazi oluphindaphindiweyo afuna ubungakanani besampulu ukuba bulungiswe ngaphambi kokwenza uvavanyo, kwaye amanani e-Bayesian akhathalele kakhulu malunga nokwenza izigqibo ezifanelekileyo endaweni yokucacisa naliphi na inani lempembelelo, ukubiza imizekelo emibini. Amandla amakhulu ngokukuko kuphela kwesixhobo kwintengiso namhlanje ukuthatha ifayile ye- Okona kulungileyo kuwo omabini amazwe indlela.
Isiphumo sokugqibela? Ngokufanelekileyo yenza ukuba abasebenzisi basebenzise iimvavanyo ngokukhawuleza, ngokuthembekileyo ngakumbi nangokubonakalayo.
Ukuze usebenzise ngokupheleleyo oko, nangona kunjalo, kubalulekile ukuqonda okwenzekayo emva kwezigcawu. Nazi iindlela ezi-5 zokuqonda kunye nezicwangciso eziza kukufumana usebenzise ubuchule ngokuchanekileyo njengepro.
Isicwangciso # 1: Qonda ukuba ayizizo zonke iimetriki ezidalwe zilingana
Kwizixhobo ezininzi zovavanyo, umba ojongwa gxwa kukuba iimethrikhi ezingakumbi ozongezayo kunye nokuzijonga njengenxalenye yovavanyo lwakho, kokukhona kunokwenzeka ukuba ubone izigqibo ezingachanekanga ngenxa yamathuba athile ”). Ukugcina iziphumo zazo zithembekile, ngokuchanekileyo zisebenzisa uthotho lolawulo kunye nezilungiso ukugcina amathuba okwenza oko ephantsi kangangoko kunokwenzeka.
Olo lawulo kunye nezilungiso zineempembelelo ezimbini xa usaya kuseta iimvavanyo ngokukuko. Okokuqala, i-metric oyichazayo njengeyakho Imatriki ePrayimari izakufikelela kubalo ngokukhawuleza, zonke ezinye izinto zihlala zihleli. Okwesibini, iimetrikhi ezingakumbi ozongeza kulingo, kokukhona iitrikhi zakho zamva ziya kuthatha ukufikelela kubalo.
Xa ucwangcisa ulingo, Qiniseka ukuba uyazi ukuba yeyiphi i-metric eya kuba yiNyakatho yakho yokwenyani kwinkqubo yakho yokwenza izigqibo, yenza loo Metric yakho yaPhambili. Emva koko, gcina lonke uluhlu lwakho lweemetriki luxhomekeke ngokususa nantoni na engafunekiyo okanye enobunzima.
Isicwangciso # 2: Zakhele iZimpawu eziKho zaKho
Ngokufanelekileyo kulunge ekunikezeleni ngeendlela ezininzi ezinomdla neziluncedo zokwahlula iziphumo zakho zovavanyo. Umzekelo, unokujonga ukuba unyango oluthile lwenza ngcono kwidesktop ngokuchasene neselfowuni, okanye ujonge umahluko kwimithombo yezendlela. Njengoko inkqubo yakho yokulinga ikhula nangona kunjalo, uya kunqwenela ngokukhawuleza amacandelo amatsha-ezi zinokuthi ngqo kwimeko yakho yokusebenzisa, njengamacandelo exesha elinye xa kuthelekiswa nokuthengwa kobhaliso, okanye ngokubanzi njenge "iindwendwe ezintsha ezibuyayo" (apho, ngokunyanisekileyo, asikwazi ukuqonda ukuba kutheni le nto ingaboniswanga ngaphandle kwebhokisi).
Isicwangciso # 3: Jonga i-Optimizely's Stats Accelerator
Isixhobo esinye esivamise ukuvavanywa ngaphezulu kokukwazi ukusebenzisa "abaphangi abaxhobileyo abaninzi", uhlobo loomatshini bokufunda ialgorithm etshintsha ngamandla apho ukugcwala kwetrafikhi kunikezelwe ngexesha lokulinga, ukuthumela iindwendwe ezininzi "ekuphumeleleni" Umahluko ngokunokwenzeka. Umcimbi onabaphangi abaxhobileyo abaninzi kukuba iziphumo zabo azizikhombisi ezinokuthenjwa zendlela yokusebenza yexesha elide, ke imeko yokusetyenziswa kwezi ntlobo zovavanyo zikhawulelwe kumatyala abuthathaka ngexesha njengokunyuka kwentengiso.
Ngokulungileyo, nangona kunjalo, inoluhlobo olwahlukileyo lwe-bandit algorithm efumanekayo kubasebenzisi kwizicwangciso eziphezulu- iStats Accelerator (ngoku eyaziwa njenge "Ukukhawulezisa ukuFunda" ukhetho ngaphakathi kwiiNgwevu). Kolu seto, endaweni yokuzama ngamandla ukubonelela abantu ngezona ndlela zintle zisebenza ngokukuko, ngokuqinisekileyo wabela ukugcwala kulwahlulo olunokwenzeka ukufikelela kubalo ngokukhawuleza. Ngale ndlela, unokufunda ngokukhawuleza, kwaye ugcine ukuphindaphinda kweziphumo zovavanyo lweMveli A / B.
Isicwangciso # 4: Yongeza iEmojis kumagama akho eMetric
Ekuboneni kokuqala, olu luvo mhlawumbi luvakala lungaphandle kwendawo, nokuba kungaphakathi. Nangona kunjalo, umba ophambili wokuqinisekisa ukuba ufunda iziphumo ezizizo zovavanyo kuqala ekuqinisekiseni ukuba abaphulaphuli bakho banokuwuqonda umbuzo.
Ngamanye amaxesha ngaphandle kwemizamo yethu emihle, amagama eetriki angadideka (linda- ngaba umlilo weetriki xa i-odolo yamkelwe, okanye xa umsebenzisi ebetha iphepha lombulelo?), Okanye uvavanyo luneemetriki ezininzi ezikrola phezulu nasezantsi iziphumo iphepha likhokelela kulwazi olupheleleyo lokuqonda.
Ukongeza ii-emojis kumagama akho eemethrikhi (iithagethi, uphawu lokujonga uphawu oluhlaza, nokuba yingxowa enkulu yemali inokusebenza) kunokubangela ukuba amaphepha afaneleke ngakumbi.
Sithembe-ukufunda iziphumo kuya kuziva kulula kakhulu.
Isicwangciso # 5: Phinda uqwalasele iNqanaba lokuBaluleka kweNkcazo
Iziphumo zithathwa njengeziqinisekileyo kumxholo wovavanyo olulungileyo xa sele zifikile ukubaluleka kweenkcukacha-manani. Ubalo lweenkcukacha-manani lixesha elinzima lemathematics, kodwa ubukhulu becala kunokwenzeka ukuba ukuqaphela kwakho sisiphumo somahluko wokwenene phakathi kwabantu ababini, hayi nje ithuba elingahleliwe.
Amanqanaba okubaluleka kweenkcukacha-manani axeliweyo ngokuchanekileyo ahlala “evumelekile” enkosi kwingcinga yemathematics ebizwa ukuvavanya ngokulandelelana -Oku ngokwenene kubenza bathembeke ngakumbi kunezinye izixhobo zovavanyo, ezilungele zonke iintlobo zemicimbi "yokujonga" ukuba uzifunda kwakamsinya.
Kufanelekile ukuba uqwalasele ukuba leliphi inqanaba lokubaluleka kwezibalo ozibona zibalulekile kwinkqubo yakho yovavanyo. Ngelixa i-95% yindibano kuluntu lwenzululwazi, sivavanya utshintsho lwewebhusayithi, hayi izitofu. Olunye ukhetho oluqhelekileyo kwihlabathi lokulinga: 90%. Kodwa ngaba ukulungele ukwamkela ukungaqiniseki okuncinci ukuze usebenze ngokukhawuleza kwaye uvavanye ezinye izimvo? Ngaba unokusebenzisa i-85% okanye i-80% ngokubaluleka kweenkcukacha-manani? Ukuzimisela malunga nomngcipheko womvuzo wakho onokuhlawula umrhumo wokubonisa ixesha, ke cinga oku ngononophelo.
Funda ngakumbi malunga neLifu lobuNgcali boLwazi
Le migaqo mihlanu ikhawulezayo kunye nokuqonda kuya kuba luncedo olukhulu ukugcina engqondweni ngelixa usebenzisa i-Optimizely. Njengaso nasiphi na isixhobo, iyabila ukuze uqiniseke ukuba unokuqonda kakuhle konke okwenziwe ngasemva kwesigcawu, ukuze uqiniseke ukuba usebenzisa isixhobo ngokufanelekileyo nangokufanelekileyo. Ngale nto yokuqonda, unokufumana iziphumo ezinokuthenjwa ozikhangelayo, xa uzifuna.
tags: iimpawuiimpawu zesikoemojiUvavanyoiimetworkngokufanelekileyoIlifu lobukrelekrele ngokufanelekileyoImatriki yokuqalaiimatriki eziphambiliukuvavanya ngokulandelelanaukubaluleka kweenkcukacha-mananiizibalo zokukhawulezisauvavanyoiimpawu zovavanyoiimvavanyo zokuvavanyaulingo lwewebhu
Ngaphambi kokujoyina IiMetro zeCro, Ubonelele ngenkonzo yentengiso epheleleyo eqhuba inkqubo yovavanyo enempumelelo njengoMlawuli weNtengiso kuDliwanondlebe olukhulu. URyan uzisa iliso elibukhali, ukuqonda okunzulu kwengqondo yomsebenzisi, kunye nobuchule bokuyila ekusebenziseni iqela leCro Metrics.
Iinkampani ze-SaaS Excel kwiMpumelelo yoMthengi. Nawe Unako… Kwaye Nantsi Indlela
Ubomi be-Ecamm: Kufuneka ubeneSoftware yayo yonke i-Streamer ebukhoma